သားလေး ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်ရောက် မှ တိုးတိုး တိတ်တိတ် ဖုန်းဆက်စုံစမ်းလာတာတွေ ကို နာကျည်းစွာ ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ရေမွန် ရဲ့ မိခင် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / သားလေး ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်ရောက် မှ တိုးတိုး တိတ်တိတ် ဖုန်းဆက်စုံစမ်းလာတာတွေ ကို နာကျည်းစွာ ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ရေမွန် ရဲ့ မိခင်
သားလေး ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်ရောက် မှ တိုးတိုး တိတ်တိတ် ဖုန်းဆက်စုံစမ်းလာတာတွေ ကို နာကျည်းစွာ ရင်ဖွင့် လာတဲ့ ရေမွန် ရဲ့ မိခင်
အမိုက်စားသီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ အနုပညာလောက မှာ အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ အားလုံးရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ Idiots အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့ အခုဆိုရင် ဘဝတစ်ပါးကို ကူးပြောင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီနော်..။
မိသားစုနဲ့အဝေးတစ်နေရာမှာ ရှောင်တိမ်းနေရင်း အစာအိမ် သွေးကြောပေါက်ပြီး ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ရေမွန်အတွက် အားလုံးက ယူကြုံးမရ ခံစားနေရသလို ကာယကံရှင် မိသားစုဝင်တွေအတွက်ကတော့ တကယ်ကို ဖြေမဆည်နိုင်တဲ့ ကြေကွဲစရာ
အသက်တစ်နှစ် အရွယ်ကတည်းက အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်အထိ ဖခင်မရှိဘဲ အမေ နဲ့ ညီမလေးကို စောင့်ရှောက်ကာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရုန်းကန်လာခဲ့တဲ့ ရေမွန် အတွက် မိခင်ဖြစ်သူက ရင်နာစွာနဲ့ စာလေးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်..။
​(၃၂)နှစ်လုံး စွန့်ပစ်ထား ခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖုန်းဆက်စုံစမ်းနေတဲ့ ရေမွန်ဖခင် ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် သားလေးအတွက် ရင်နာရတာတွေကို နာကျည်းစွာ ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်..။
လူမဆန်စွာ စွန့်ပစ် ခဲ့ပြီး
ရောက်မှ တိုးတိုး တိတ်တိတ်
ဖုံးဆက်စုံစမ်းတယ် တဲ့လား ?
ဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့ လို့လဲ ?
And. . .Fuck u…” ဆိုပြီး အဆိုတော်ဒေါ်ခင်မြတ်မွန် က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။
လောကဓံရဲ့ ရိုက်နှက်မှု ဒဏ်တွေကို ရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရေမွန်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အတွက် ပရိသတ်တွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရသလို မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်း အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
Previous post တက်တက် ကြွ ကြွ ကပြနေ တဲ့ ဘေဘီမောင် ရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယို
Next post ဟော့ ဖြစ်ပြီး လူကြိုက် များ နေတဲ့ မော်ဒယ် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ အလန်း စား ပုံရိပ်များ